Yakobo 5 | Intanɛt so Bible | Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
5 Afei muntie, mo adefo,+ munsu nkekaw mu ahohia a ɛreba mo so nti.+ 2 Mo ahonyade aporɔw, na mmoawa+ awe mo ntade nguguso. 3 Mo sika ne dwetɛ awe nkannare asɛe, na nkannare no bɛyɛ adanse atia mo na ebedi mo nam. Biribi a ɛte sɛ ogya+ na moakora so+ wɔ nna a edi akyiri no mu.+ 4 Hwɛ! Akatua a ɛsɛ sɛ mode ma adwumayɛfo a wotwaa mo afuw mu nnɔbae a mode akame wɔn+ no reteɛm,+ na atwafo no sufrɛ+ adu asafo Yehowa asom.+ 5 Moanya asetena pa wɔ asase so na moadi ɔhonam akɔnnɔ akyi.+ Moama mo koma adɔ srade okum da no.+ 6 Moabu ɔtreneeni fɔ akum no. Ɔrensiw mo kwan anaa?+ 7 Enti anuanom, munnya ntoboase nkosi Awurade mmae.+ Hwɛ! Okuafo kɔ so ara twɛn asase so aba a ɛsom bo no, na ɔtɔ ne bo ase wɔ ho kosi sɛ obenya osukan ne adonsu.+ 8 Mo nso munnya ntoboase;+ momma mo koma nnyina pintinn, efisɛ Awurade mmae no abɛn.+ 9 Anuanom munnsi apini nntia mo ho mo ho na wɔammu mo atɛn.+ Hwɛ! Ɔtemmufo no gyina apon ano.+ 10 Anuanom, momfa adiyifo+ a wɔkasaa Yehowa din mu+ no amanehunu+ ne wɔn ntoboase+ nyɛ nhwɛsode.+ 11 Hwɛ! Yebu wɔn a wɔagyina mu no anigyefo.+ Moate Hiob+ boasetɔ no ho asɛm na moahu nea Yehowa ma efii mu bae,+ sɛ Yehowa wɔ ayamhyehye ne mmɔborɔhunu.+ 12 Nanso, me nuanom, nea ɛsen ne nyinaa no, monnka ɔsoro anaa asase ntam anaa ntam foforo biara.+ Mmom momma mo Yiw nyɛ Yiw, na mo Dabi nyɛ Dabi, na moanhwe atemmu mu.+ 13 Mo mu bi wɔ hɔ a amane bi ato no anaa? Ma ɔnkɔ so ara mmɔ mpae.+ Obi wɔ hɔ a ne ho atɔ no? Ma ɔnto ayeyi nnwom.+ 14 Mo mu bi yare anaa?+ Ma ɔmfrɛ asafo no mu mpanyimfo+ na wɔmmɔ mpae mma no, na wɔnsra no ngo+ Yehowa din mu. 15 Na gyidi mpaebɔ no bɛma nea ɔnte apɔw no ho ayɛ no den,+ na Yehowa bɛma no so.+ Na sɛ wayɛ bɔne bi nso a, wɔde befiri no.+ 16 Enti monkeka mo bɔne nkyerɛkyerɛ mo ho pefee+ na mommɔ mpae mma mo ho na mo ho ayɛ mo den.+ Sɛ ɔtreneeni adesrɛ reyɛ adwuma a, ɛwɔ tumi kɛse.+ 17 Ná Elia yɛ onipa a ɔwɔ nkate te sɛ yɛn ara,+ nanso ɔbɔɔ mpae dennen sɛ osu nntɔ;+ na ampa ara osu antɔ asase no so mfe abiɛsa ne asram asia. 18 Afei ɔsan bɔɔ mpae na ɔsoro maa osu na asase sow n’aba.+ 19 Me nuanom, sɛ mo mu bi man fi nokware no ho na ɔfoforo dan no a,+ 20 munhu sɛ nea ɔdan ɔbɔnefo fi ne kwammɔne so+ no begye ne kra afi owu mu+ na wakata bɔne pii so.+